उत्साह प्रक्रिया परिभाषा र उदाहरणहरू
रसायन विज्ञान शब्द संग्रह प्रायः प्रक्रिया को परिभाषा
एक प्रणालीमा, के यो रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, वा भौतिकीमा हुन चाहे त्यहाँ असामान्य प्रक्रियाहरू र नसोर्सो प्रक्रियाहरू छन्।
उत्साह प्रक्रिया परिभाषा
एक उत्साह प्रक्रिया एक हो जुन वातावरणबाट कुनै पनि ऊर्जा इनपुट बिना हुनेछ। यो एक प्रक्रिया हो जुन यसको आफ्नै मा हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक बलले उचाइलाई लुगा लगाउनेछ, पानीलाई उडाइनेछ, बरफ पानीमा पिउँनेछ, रेडियोस्टोपेसनले घटाउनेछ, र फलामलाई खडा गर्नेछ।
कुनै हस्तक्षेप आवश्यक छैन किनभने यी प्रक्रियाहरू थर्मोडायरेसनल अनुकूल हुन्छन्। अर्को शब्दमा, प्रारम्भिक ऊर्जा अन्तिम ऊर्जा भन्दा उच्च छ।
नोट कसरी चाँडै एक प्रक्रियामा असर पर्दैन कुनै असर छैन वा चाहे उनी एक्लो छैन। यो जंग को लागि स्पष्ट हुन को लागि एक लामो समय लाग्न सक्छ, तर जब लोहा हावा को प्रवाह हुन्छ प्रक्रिया हुनेछ। एक रेडियोकर्मी आइसोटोपले हजारौं वा लाखौं वा लाखौं वर्षहरू पछि तुरुन्तै वा पछि लाग्न सक्छ।
प्रायः विषस नसोर्सो
नसोर्सो प्रक्रिया घट्नको लागि ऊर्जा थप्न सकिन्छ। प्रायः प्रक्रियाको उल्टो एक अपमानजनक प्रक्रिया हो। उदाहरणको लागी, जंगले फेरि आफ्नो मा फलामलाई बदल्न सक्दैन। एक छोरी आइसोटियो यसको आमाबाबुमा फर्किनेछैन।
नि: शुल्क ऊर्जा र असमानता
गिब्समा परिवर्तन प्रक्रियाको लागि नि: शुल्क ऊर्जाले यसको असामान्यता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। निरन्तर तापमान र दबाबमा, समीकरण यो हो:
ΔH एन्होल्पामा परिवर्तन भएको छ र ΔS एन्ट्रोपीमा परिवर्तन हुन्छ।
यदि ΔG नकारात्मक छ भने, प्रक्रिया सहज छ।
यदि ΔG सकारात्मक छ भने, प्रक्रिया अप्रत्याशित छ (तर उल्टो दिशामा सहज हुनेछ)।
यदि ΔG0हो भने यो प्रक्रिया संतुलनमा छ र समयको साथ कुनै नेट परिवर्तन भएको छैन।
रसायन विज्ञान मा सामान्यता परिभाषा
रसायन विज्ञान मा कन्जगेट परिभाषा
आंतरिक सम्पत्ति परिभाषा (रसायन विज्ञान)
इलेक्ट्रोन कैप्चर परिभाषा
अनुभविक सूत्र: परिभाषा र उदाहरणहरू
कार्यात्मक समूह परिभाषा
रसायन विज्ञान मा परिभाषा परिभाषा
सामान्य बोइल प्वाइन्ट परिभाषा (रसायन विज्ञान)
बाइनरी एसिडको परिभाषा
बैटम्यानको वास्तविक सृष्टिकर्ता को थियो?
अज्ञात वा अज्ञात मेजर को परिभाषा
चेन पत्र: परिभाषा र उदाहरणहरू
लिब्रा चन्द्र (ट्रांजिट) - मूड र हप्पिंग्स
इटालियन Verb Conjugations: Incontrare
यस होटल को लागि खोज्नुहोस Estados Unidos को लागि
हाई स्कूल डाइविंग प्रतियोगिता आवश्यकताहरु
Anasazi समयरेखा - पुर्खा पुउब्लो मानिसहरूलाई क्रान्ति
डा। मार्टिन लूथर राजाको जङ्गल, जूनियर
जनगणना वृद्ध अमेरिकियों मा आँकड़े को पेशकश गर्दछ
होलमा पाउनुहोस्! यूएस ओपन इतिहासमा प्रत्येक एसी
मोर्स कोड कसरी सिक्न
आर्चनगेल जोओपीएल, एन्जिल ऑफ ब्यूटी
पनीर स्लायरको इतिहास
मौसम विज्ञान भनेको के हो?
FDR मा हत्या प्रयास
लियोनार्डो दा भिन्कीको अन्तिम राइट
त्यसोभए किन किन सैतानवादसँग सम्बद्ध छ?
शिक्षकलाई भर्ना गर्न रणनीति
मजेदार ट्रम्प ट्रांसमिशन मेमो
16 जून 1976 मा सोभियत मा विद्यार्थी विद्यार्थीको उत्थान
ट्रेलर तारिण रेखाचित्र र रङ चार्ट
4 समय प्रबंधन युक्तिहरु जुन समय को थोडा निवेश को शामिल गर्छन